Iintaba zeAndes eVenezuela | Ukuhamba kwe-Absolut
Enye yezona ndawo zintle kwaye zibanzi zeentaba emhlabeni yi Iintaba zeAndes. Iwela amazwe aliqela eMzantsi Melika kwaye ihamba itotali 8500 yeekhilomithaubuhle obumsulwa ...
Inxalenye yolu luhlu lweentaba inqumla iVenezuela, yinto ebizwa ngokuba nguMntla Andes: uluhlu olumnandi lweentaba ezidlula eColombia nase-Ecuador. Kodwa namhlanje siza kugxila kwi Iintaba zeAndes zaseVenezuela.
1 Iintaba zeAndes
2 Ukhenketho kwiiAndes zaseVenezuela
Lo yeyona ntaba inde kakhulu kwilizwekazi liphela ehlabathini kwaye lungohlulwa lube ngamacandelo amathathu, Andes esemantla, i Andes centrales kunye Amazantsi eAndes.
Ama-Andes akumantla, lawo asibizayo namhlanje, angaphantsi kweekhilomitha ezili-150 ububanzi kwaye aphakathi ngokomyinge weemitha ezingama-2500 XNUMX. I-Andes embindini zezona zibanzi kwaye ziphezulu.
Amantla eAndes, ekwabizwa ngokuba ngamantla eAndes, Baqala kwi-Barquisimet-Carora uxinzelelo, eVenezuela, ukuya kwithafa laseBombon, ePeru. Iidolophu zaseVenezuela ezifana neMérida, iTrujillo okanye iBarquisimeto, zikwezi ntaba zibalulekileyo.
Apho ezi ntaba zidlula, imbonakalo yeVenezuela ifumana iimpawu ezizezazo. Kukho imihlaba ethe tyaba kulwandle kodwa kukho neencopho eziphakamileyo, yiyo loo nto kukho imibala emininzi kunye neendlela zomhlaba ezimangalisayo.
Iintaba zeAndes eVenezuela zineempawu ezintathu eziphambili: ISierra de La Koulata, iSierra Nevada kunye neSierra de Santo Domingo. Bafikelela kubude obufikelela kwiimitha ezingama-5 5.007. Umzekelo, eyona ndawo iphakamileyo elizweni ilapha, ineemitha zayo ezingama-XNUMX, i Incopho yeBolivar. Nangona kukho nabanye abahloniphekileyo njengaye I-Humbold ineemitha ezingama-4-940, iBompland ineemitha ezingama-4880 okanye iNgonyama ineemitha ezingama-4.743.
Imozulu ijikeleza phakathi kwemozulu esepolar, ephezulu kakhulu, kunye neyona mozulu ishushu emazantsi ezintaba. Kuyana, njengakwilizwe liphela, ukusuka ngo-Epreli ukuya ku-Novemba. Imilambo inqumla phakathi kweentaba, nekunganyanzelekanga ukuba zihambe kuba zimfutshane kwaye zinamanzi amakhulu. Oku kuhamba kuphelela kwiimbiza ezimbini ze-hydrographic: kwelinye icala, enye ikwiCaribbean, ngeLake Maracaibo, kwelinye icala, i-Orinoco, nge-Apure River.
Uhlaza lwendawo luxhomekeke kwimozulu, kwaye imozulu, esele siyazi, inento yokwenza nokuphakama. Kukho utyani oluqhelekileyo lwemozulu eshushu neyomileyo kakhulu kwiimitha zokuqala ezingama-400 zobude, emva koko zivele Imithi emikhulu, ngaphezulu kwamawaka amathathu eemitha amahlahla, ngaphezulu kusekho uhlaza lweParamera kwaye ngaphezulu kwe-3 lamawaka eemitha esele sinazo Ubulembu kunye nobulembu.
IiAndes zaseVenezuela zenza njalo ummandla ekuphela kwawo elizweni onoluhlu lweentlobo zezityalo. Kwindawo yemithi emikhulu, phakathi kwe-500 kunye ne-2 yeemitha, imbonakalo yomhlaba ibukeka njengehlathi elinemvula ke kukho imisedare, i-laurels, i-bucares, i-mahogany ... Intle, kuba Olu hlobo lwesityalo lukwabonakala nakwizilwanyana.
Kwizilwanyana zaseVenezuela iAndean zineebhere, ikhondor eyaziwayo yeeAndes . , iinyoka, amacilikishe kunye needorado kunye neeguabinas, phakathi kweentlobo zeentlanzi.
Ukongezwa kweeAndes zaseVenezuela kwenza Ukuthetha ngokwezopolitiko bawela amazwe aliqela eli lizwes: Barinas, Apure, Portuguesa, Táchira, Mérida kunye noTrujillo. Kwaye njengoko besitshilo apha ngasentla kukho izixeko ezininzi ezibalulekileyo ezinjengeMérida, iTrujillo, iBoconó, iSan Cristóbal ...
La uqoqosho lwendawo yayihlala igxila ekukhuleni ikofu kunye nokulima, kodwa emva kokufunyanwa kwe petroleum izinto zatshintsha. Ayikuko ukuba izityalo ziyekile ukwenziwa, eneneni ukusuka apha kuza imveliso yeetapile, iimbotyi, imithi yeziqhamo, imifuno, iibhanana kunye neseleri, iihagu, iinkukhu kunye neenkomo kwintengiso yalapha, kodwa namhlanje ioyile iyalawula.
Ukhenketho kwiiAndes zaseVenezuela
Nangona kangangexesha elide le nxalenye yeVenezuela ibikude nezokhenketho, besisoloko silinxulumanisa nelizwe leCaribbean, ixesha elithile ngoku, belivulelekile kulo msebenzi. Ukuphuculwa kwezixhobo zonxibelelwano (ukuphucula ukwakhiwa kwendlela kumashumi eminyaka akutshanje) ibiyinjini.
Nangona ukubekwa bucala kwabantu ekuthiwa ngabantu basemazantsi kubathintele kwabagcina kude nemali eshiya ukhenketho ngasemva, ngendlela ethile yabanceda ukuba babaluleke kangaka kule marike namhlanje. Kwaye kunjalo Ukubekwa bodwa kubalondolozile kuko konke ukwahluka kwemveli kunye nekoloniyali.
Abo bahlala kule ndawo yelizwe bathethelela a ukukhanya kwezokhenketho, iimpembelelo eziphantsi, egcina indlela yabo yobomi kunye nokusingqongileyo. Ukhenketho olusezandleni zabantu ngokwabo okanye kwezokhenketho esinokuthi luluntu.
Singathetha ngezinye zazo Iindawo ezicetyiswayo apha kwiAndes zaseVenezuela. Umzekelo, isixeko sase Merida. Yayisungulwa ngo-1558 kwaye inobuhle isigcina-ntloko sobukoloniyali, ngelixa lijikelezwe ziintaba ezintle. Uyayibona ibhotwe lika-Archbishop, ikomkhulu le-Universidad de los Andes, iCathedral okanye i-Government Palace.
IMerida inezitrato ezintle, umphefumlo womfundi, a kwimarike kamasipala enemigangatho emithathu uxakeke kakhulu kwaye uyathandwa, indawo yokubeka iayisi khrimu eneencasa ezingaphezu kwe-600 ze-ice cream, the Coromoto ice cream parlor, kunye nendawo yayo kwi Incwadi yeGuinness yeeRekhodi neepaki ezininzi kunye nezikwere. Enye yeepaki ezidumileyo yiLos Chorros de Milla, enamachibi, iingxangxasi kunye nomyezo wezilwanyana.
Kukho i- Imoto yekhebula iMérida ekuthatha ukuya ePico Espejo kwiimitha ezingama-4765, phantse iphantsi kuneMont Blanc yaseYurophu. ILos Aleros Folk Park, i Igadi yezityalo ngokuhamba kwayo okuhlekisayo emithini ... Kwaye ukuba uyazithanda iintaba onazo iihambo zokuya eSierra Nevada neencopho zawo ezintle.
Esinye isixeko esidumileyo ISan Cristóbal, ikomkhulu lelizwe laseTáchira, ngaphantsi kwe-1000 yeemitha zokuphakama kwaye ngenxa yoko ephezulu kakhulu. Ivela ku-1561 kwaye isondele kumda neColombia ngenxa yoko ithengisa kakhulu. Kwakhona, ineecawa ezininzi zekoloniyali zokundwendwela.
Trujillo Ikomkhulu lelona lizwe lincinci lase-Andean Venezuela. Ikoloniyali kwaye intle njengalo lonke ilizwe. Yayisungulwa kwi-1557 kwaye iphakame kwiimitha ezingama-958. Iyaziwa ngomfanekiso omkhulu weNtombi Enyulu yoXolo, engaphezulu kweemitha ezingama-46 kunye neetoni ezili-1200 zobunzima. Inemibono elungileyo kwaye ifoto esuka apha iyimfuneko. Idolophu endala intle, ine-baroque entle kunye nothando olukhulu.
Ezinye iindawo ezintle ziyiJajó, Táriba, Peribeca, Capacho ... zonke ezi ndawo zinomtsalane kunye necandelo labo le-gastronomic kunye nehotele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iintaba zeAndes eVenezuela